AppCenter inoda kuve iyo Linux software Center | Linux Vakapindwa muropa
Parizvino, yakawanda software inowanikwa yeLinux yakavhurika sosi. Izvi zvakare zvinowanzoreva kuti vagadziri vayo havabhadhare chero chinhu kubasa ravo, chatisingakwanise kutaura kuti ndiko kururamisira kukuru. Chikamu neichi mupfungwa, yekutanga OS yakaunza yayo AppCenter.
Dambudziko nderekuti AppCenter inowanikwa chete pane imwe sisitimu yekushandisa. Ndo izvo zvinoda kuchinjwa naDaniel Foré nechikwata chake. Vachaedza senge pavakavhura yavo software centre, ye crowfounding svikiro en IndieGoGo. Mushandirapamwe wakavhurwa maawa mashoma apfuura uye vakatounganidza hafu yemadhora zviuru gumi zvavanoda, saka zvinoita sekunge vanozadzisa chinangwa chavo.
AppCenter yemunhu wese
Zvinangwa zvaForé neichi chirongwa ndezve 4:
Wana open source vanogadzira monetize maapplication avo pane mamwe ese maLinux kugoverwa.
Ipa simba vanogadzira kuti vape mafomu avo nehunyanzvi hwekugadzira
Kuvandudza kuvanzika, kuchengetedzeka uye kugadzikana.
Rongedza maitiro ekubhadhara.
Foré nechikwata chake ronga kuvaka zvakare iyo AppCenter backend kubva pakutanga kubvumidza nyowani tekinoroji vagadziri kuti vaikumbire, uye vari kuungana kuseri kwemafomati fomati Flatpak kuzviita. Vanotova nazvo yakabatana naFlathub uye zvino ivo vakanangisa kukwezva Vasingagumi uye vanogadzira GNOME.
Zvisinei. Unogona here kuva netarisiro yekuti AppCenter ichave iri "iyo Linux software centre" kana zvimwe zvakafanana? Zvakaoma. Linus Torvalds akanyunyuta mwedzi yapfuura kuti muLinux mune akawanda masisitimu / mapakeji ekuisa iyo software. Pasina kuenda kumberi, Canonical inoshandisa Snaps, asi kune zvakare Flatpak uye zvinoita kunge zvisiri nyore kuti chero munhu amonyanise ruoko rwake. Kunyangwe icho chaicho chinangwa chakasiyana: zvakapusa, kuti isu tinogona kuisa AppCenter pane chero Linux-based operating system, sezvo isu tichigona kusarudza pakati pesoftware nzvimbo dzakadai seUbuntu Software kana Discover (Plasma). Saka zvinoita sekunge tichakurumidza kuisa software nyowani pane yedu yekuparadzira Linux, iyo ichabatsira vanogadzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » AppCenter inoda kuve Linux software hub kuitira kuti vanogadzira vabhadhare
Izvi zvakafanana neapo iwe paunotanga kuona bhaisikopo uye zano racho rinoita kuti iwe ufungidzire kuti iyo bhaisikopo ichaguma sei, chii chimwe chandingafunge nezve… .it ndeye hunch.
Zvinoenderana nekuti vashandisi vane hungwaru sei kuti vagutsikane kuti nekubhadhara vanozowana zvakawanda kupfuura avo vasingabhadhari.
Zvemwaka zvakatopihwa, static kuunganidzwa, yakavharwa sosi, kubhadhara kodhi.
Ndinokushuvira wakanakisa winlinux iwe waunogona kuwana… kukuona iwe mwana.